MUQDISHO(P-TIMES)- Kulan looga hadlay isu diyaarinta howl-gallo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab oo laga fuliyo deegaanada ay kaga sugan yihin dalka ayaa waxaa lagu qabtay xarunta taliska Booliska ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa gudoomiyey shirka, waxaana goob-joog ka ahaa wasiirka iyo wasiiru dowlaha Maaliyadda, wasiiru dowlaha difaaca iyo taliyaasha Booliska iyo kuwa xoogga dalka.
Xasan Cali Khayre ayaa faray dhamaan wasiirrada iyo taliyaasha ciidamada ee kulanka ka qayb galay iyo hay’adaha dowliga ah ee qaybta ka ah qorshaha inay dar dar geliyaan dadaalada lagu diyaarinayo howlgalada si loogu guulaysto xoraynta degaanada Al-Shabaab uga sugan yihiin dalka.
Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay qorshaha horumarineed ee dhamaan adeegyada bulshada looga hirgelinayo deegaanada laga saaro Al-Shabaab.
Taliyaasha iyo wasiirrada kulanka ka qeyb galay ayaa Ra’iisul Wasaaraha u balanqaaday in sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhamaystirayaan qorshaha xoreynta deegaanada ka maqan gacanta dowladda iyo hir-gelinta adeegyada ka dambeeya ee lagu horumarinayo bulshada iyo deegaanka.